Iindaba - "I-LUXMAIN" yokuphakanyiswa okungqonge iifom zoluhlu lweemvelaphi
Emva kweminyaka esi-7 yophuhliso, i-LUXMAIN's inground lift igqibile ukuyila uthotho olupheleleyo lwesithuba esinye, isithuba esiphindwe kabini, iimoto zorhwebo kunye nokwenziwa kweelifti ezingaphakathi.
Isithuba esinye sokuphakamisa indawo esingqonge indawo yokusebenza siyasebenza ekuhlambeni nasekugcinweni kwemoto. I-pallet yokuphakanyiswa kwe-washer yemoto ifakelwe ipleyiti yokuqinisekisa ukuthambeka kwezantsi kwesithuthi kunye nokubonelela ngendawo ebanzi yokucoca i-chassis. kunye neeplati zokuhambisa amanzi. Inokuxhotyiswa nge-H / X-uhlobo lokuxhasa iingalo ukuze abasebenzisi bakwazi ukugqibezela ngokulula ukugcinwa kwemihla ngemihla.
Isithuba esiphindwe kabini kunye nothotho lwezithuthi zonyuselo lweenground zisetyenziselwa ulondolozo lwesithuthi kunye nendibano yezithuthi kunye nohlengahlengiso. Kukho iintlobo ngeentlobo zesakhiwo, kubandakanya iiposti ezimbini ezihlanganisiweyo, iintlobo ezimbini zokwahlulahlula, ngokweemfuno zokwenyani, iindlela zolawulo ezahlukeneyo ezinje ngesanti kubunzulu baphantsi, ngoomatshini okanye i-PLC inokusetyenziswa. I-LUXMAIN isithuba esiphindwe kabini sokuphakanyiswa kwe-inground sidlulile isiqinisekiso se-CE.
I-LUXMAIN inokwenza ngokusesikweni iintlobo ezahlukeneyo zeelifti ezingqingqwa ngokweemeko zokusebenza kunye neemeko zejoloji, ezifanelekileyo ikakhulu kwimimandla yokuvelisa imveliso enje ngendibano yezithuthi, oomatshini bokwakha kunye neefolokhwe. Esi sixhobo ngokubanzi samkela iiposti ezimbini okanye iifom ezininzi zeposi, Ubungakanani bokuphakamisa ubuninzi besixhobo esigqityiweyo sifikelele kwiitoni ezingama-32.
I-LUXMAIN iya kubonelela abathengi ngezikimu zokuphakamisa ezingqonge ngokuthe ngcembe.
Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Isilinda esibambeleyo esinye, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi,